FAMPAHALALANA AMERIKANINA ANGLISY COONHOUND FAMPAHALALANA MOMBA NY ALIKA SY SARY - ALIKA
Fampahalalana amerikana anglisy coonhound fampahalalana momba ny alika sy sary
Buck the American English Coonhound (Redtick Coonhound) amin'ny 6 taona
Lisitry ny American English Coonhound Mix Dogs
uh-mer-i-kuh n ing-glish koon-hound
Ny palitaon'ny English Coonhound dia fohy sy mafy. Ny loko palitao dia ahitana: manga sy fotsy miloko, mena miloko fotsy, miloko miaraka amin'ny fikitihana, mena sy fotsy, ary fotsy sy mainty. Mena na mainty be loatra no lesoka amin'ny peratra fampisehoana. Toy ny bawl hound ny hodiny. Ny rambony dia lava halava ary avo. Mahafinaritra, mailo, matoky tena ary mifanerasera amin'ny olombelona sy ny alika.
Ny English Coonhounds dia mavitrika, manan-tsaina ary miasa. Tia sy be zotom-po hampifaly ny tompony, ny fahatsiarovan-tena lehibe dia mahatonga azy ireo ho mpihaza tena. Ity karazana ity dia karazana coonhound mpifaninana haingana sy haingana. Tena natokana ho an'ny fianakaviany izy io, manao alika mpiara-miasa tsara. Miaina anaty trano tsara izy io ary milalao mpiambina tsara ho an'ny fianakaviany sy ny tranony. Matetika izy ireo no tsara indrindra amin'ny ankizy be taona, nefa afaka manao tsara amin'ny kely kokoa koa. Tsy misy mety olombelona ho an'ny mpitarika canine ary ny serasera dia mety ho somary mahery setra sy / na hivoatra ny sasany olan'ny fitondran-tena . Mila tompona izay izy ireo mafy orina, matoky tena ary tsy miovaova miaraka amin'ny rivotra fahefana . hifanerasera tsara ity karazany ity, tsara kokoa raha mbola tanora izy ireo mba hisorohana azy ireo tsy ho voatokana amin'ny olon-tsy fantatra. Aza avela hiala amin'ny tadiny ity faritra ity, satria mety hanala izy ireo aorian'ny fofona mahaliana. Manana toetra voajanahary mahery amin'ny biby biby izy ireo. Tsy ampy fanatanjahan-tena ara-tsaina sy ara-batana ho tonga olona avo lenta izy ireo.
Hahavony: 21 - 27 santimetatra (53 - 69 cm)
Lanja: 40 -65 pounds (18 - 30 kg)
Ireo alika ireo dia tsy atolotra ho an'ny fiainana an-trano. Mavitrika be izy ireo ao an-trano ary manao tsara indrindra amin'ny velaran-tanety.
Ny English Coonhounds dia mila mihazakazaka isan'andro mba hahasambatra. Mila entina isan'andro, lava, haingana izy ireo MANDEHANA na jogging izay ahatongavan'ny alika amin'ny sisiny na ao ambadiky ny olona mitazona ny firaka, toy ny ao an-tsain'ny alika, ny mpitarika no mitarika ny lalana. Izy ireo dia mety ho lasa strung ambony sy / na Handringanana raha tsy ampy fanatanjahan-tena sy / na izy ireo FIRAFITRA . Mety hiala izy ireo aorian'ny fofona mahaliana, koa aza esorina amin'ny fantsom-panafody English Coonhound raha tsy ao amin'ny toerana azo antoka ianao.
Ilay akanjo fohy sy mafy dia mora karakaraina. Afangaroy sy borosy amin'ny borosy mafy volo, ary shampoo raha tsy ilaina. Ity karazana ity dia mpitrandraka antonony.
Nolazaina fa ny tantaran'ny coonhound anglisy dia ny tantaran'ny coonhounds rehetra. Ankoatra ny Plott Hound, ny ankamaroan'ny coonhounds dia azo zahana miverina amin'ny English Foxhound . Tamin'ny taona 1905 ny English Coonhound dia nosoratan'ny UKC voalohany tamin'ny anaran'ny English Fox & Coonhound. Tamin'izany fotoana izany dia nampiasaina tamin'ny fihazana amboahaolo na dia betsaka noho ny ankehitriny aza. Ny anarana dia taratry ny fitoviana nananan'ny karazany Foxhound Amerikanina ary ny English foxhound . Na dia nomena toerana mitokana aza ny mena sy ny mainty ary ny tan, ny antsoina hoe coonhound hazo hafa rehetra dia nantsoina hoe anglisy taorian'ny fiandohan'ny taonjato. Anisan'izany ireo Treeing Walker Coonhound ary ny Bluetick Coonhound . Noheverina ho mitovy karazana daholo izy ireo. Ny fiovaovan'ny loko no nampisaraka azy ireo. Ireo alika voadona mafy dia nisaraka tamin'ny Anglisy, ary ny Bluetick Coonhound dia nekena ho karazana mitokana tamin'ny 1945. Tamin'ny 1946 dia nitokana hound ilay antsoina hoe Treeing Walker Coonhounds. Na dia manjaka aza ny amboa mena-miloko, dia mbola mandraka androany dia mbola misy alika anglisy miloko sy miloko manga. Ny English Coonhound dia namboarina mba hifanaraka amin'ny toetrandro sy ny tany tery amerikana. Anglisy iray antsoina hoe 'Bones', fananan'i Kolonely Leon Robinson, no nandrombaka ny iray tamin'ny Tompondaka Nasionalin'ny Coonhound voalohany. Ny karazany dia mbola ampiasain'ny mpihaza azo zahana sy tompona hound mifaninana manerana an'i Etazonia.
UEBFA = Fikambanan'ny mpiompy anglisy sy mpiompy anglisy
Flora the Redtick Coonhound telo taona mipetraka eo amin'ny tohatra.
Lydia amin'ny 1 taona - izy dia loko miloko manga amin'ny English Coonhound.
Cody the Redtick Coonhound (English Coonhound) sahabo ho 1 taona eo ho eo - hoy ny tompony, 'Tia mandry izy ary matory eo amin'ny farafara sy eo am-pandriana miaraka aminao. Araka ny hitanao amin'ity sary ity dia toa mieritreritra izy fa saka (izany no eritreretintsika farafaharatsiny) tiany ny mandry eo ambadiky ny sezantsika ary mijery eo am-baravarankely. Tsy azonay antoka hoe ahoana no hataony mihaza, fa ho hitantsika amin'ity taona ity. '
Dixie ilay English Coonhound anglisy iray taona - hoy ny tompony, 'Izy no alika mamy sy ankafizin'ny olona indrindra nananako.'
Purdie amin'ny 2 2 taona
I Hana io fony izy mbola alika kely niaraka tamin'ny namany saka.
Lillie sy Mollie, Redtick English Coonhound amin'ny faha-6 volana— 'Nalaiko ireo sary ireo indray maraina raha nilentika teo ambony sezalava izy ireo. Tsy mbola nanana alika tia 2 intsony izahay. Mpirahavavy izy ireo ary tena mifankatia sy milalao. '
Lillie sy Mollie, Redtick English Coonhounds amin'ny faha-6 volana
Hijery ohatra hafa momba ny American English Coonhound
American English Coonhound Sary 1
Golden retriever chesapeake bay retriever mix
sarin-trondro misy ich
jack russell boston terrier mifangaro alika kely amidy
Jack Russell Terrier mifangaro amin'ny pitbull